Imba | MRU MEDIA
Fair Use Chiziviso
VaMerovingians vakabva kune chikara here? Sangana neQuinotaur
3 maminitsi akaverengwa
Zviratidzo zvisinganzwisisike uye zvakavezwa muRoyston Cave yakagadzirwa nemunhu
4 maminitsi akaverengwa
Yakarasika mumhute yenguva: Iyo yekare Sao budiriro muCentral Africa
Makhunik: 5,000-year-old city of dwarfs aitarisira kudzoka rimwe zuva
Iko mabhatafuru ekare aivapo maruva asati aitika?
1 maminitsi akaverengwa
Chakavanzika cheimba yekuvigwa isina kuputsika Mukati mepiramidhi yeDahshur isingazivikanwe muEgypt.
Chakavanzika che7,000-year-old Ubaid lizardmen: Reptilians muSumer yekare ??
Zvepakati zvisikwa, Vatorwa kubva kuhukuru hunogara pamwe chete nedzedu?
Starchild Dehenya uye Nyeredzi Vana: Ndivanaani?
Project Silver Bug: Vakashandisa tekinoroji yekunze kugadzira UFO?
2 maminitsi akaverengwa
Yakarasika Viking musha Borgund uye ayo 45,000 zvigadzirwa zvakavigwa mukamuri yepasi yakaongororwa nenyanzvi.
Iyo Windover bog miviri, pakati pezvisinganzwisisike zvekuchera matongo zvakambowanikwa muNorth America
Bhuku raEzekieri neNgoro yeMoto Inobhururuka: Yakadudzirwa zvisizvo tekinoroji yekare yekumwe?
5 maminitsi akaverengwa
Lola: Mukadzi weDombo Age ane DNA kubva ku'kutsenga kwekare 'inotaurira isinganzwisisike nyaya
Chakavanzika chemadziro eKhatt Shebib muJorodhani
Vatsvakurudzi vakawana guva rakavakwa paMars, rakafanana neriPasi!
Chakavanzika cheOrion: Nei zvakawandisa zvivakwa zvekare zvakanangana neOrion ??
Masayendisiti ari kutsvaga vatorwa vanoona isinganzwisisike ET chiratidzo kubva kuProxima Centauri
Kana Mars yakagarwa kamwe, chii chakaitika kwazviri?
Chakavanzika cheMars chinodzika sezvo masayadhi ayo asina kujairika eradar akawanikwa asiri emvura: Chii chiri kubikwa paRed Planet?
Zvinotyisa zve'Russia yekurara kuyedza '
10 maminitsi akaverengwa
Murwere akavhundutsa vanovhiya neropa rakasvibira saStar Trek's Mr Spock
35 zvisinganzwisisike chokwadi nezve nzvimbo uye zvakasikwa
Chakavanzika chisina kugadziriswa chaJune 1962 Alcatraz Kutiza
Alexander the Great akasangana ne 'dhiragoni' muIndia here?
Chivabvu. 28, 2022
Kunyangarika kwaBrandon Swanson: Sei ane makore 19-gore akarasika murima rehusiku?
Vakarasika muPanama - Kusagadziriswa kufa kwaKris Kremers naLisanne Froon
Iyo inotyisa nyaya yaDavid Shearing uye iyo Wells Grey Mhondi dza1982
Njodzi yaBushman's Hole: Nyaya yaDeon Dreyer naDave Shaw
Necropolis yeFenikiya isingawanzo kuwanikwa muAndalucia, Spain inoshamisa, masayendisiti anoti
Iyo paleocontact hypothesis: Mabviro eiyo yekare astronaut theory
Saina Kuti Uwane Tsamba Dzedu
Ziviswa nezve akanakisa ekuwedzera mbiru vhiki nevhiki.
Nekutarisa bhokisi iri, unosimbisa kuti waverenga uye uri kubvumirana nemitemo yedu yekushandisa maererano nekuchengetwa kwedata rakatumirwa kuburikidza nefomu rino.
Isu tinoshandisa makuki pane yedu webhusaiti kukupa iwe chakanyanya kukosha chiitiko nekurangarira zvaunofarira uye kudzokorora kushanya. Nekuramba uchitsvaga yedu saiti, unobvumidza kushandiswa kwese kuki.
Read MoreVhara & Gamuchira ⟶
Iwe haugone kupurinda zvirimo mune ino webhusaiti.